Ọrụ Mbelata, Nrụpụta Ngwaahịa, Ahịa N'ogbe - Nextschain
Ọrụ kacha mma na ọrụ mmezu
Ngwọta Ntugharị niile iji nyere gị aka ịchekwa oge ma nweta uru dị elu
Bido Na Na Na
100% Ndozi na Onwe. Enweghị Kaadị E Si Nweta Achọrọ.
Ntụnye kacha mma
NextsChain bụ otu nkwụsị nkwụsị mmiri maka ecommerce. Anyị na-enye ngwaahịa dị mma maka ịre, nye iwu ka emezu, nchịkọta nchịkọta jikwaa ma hazie mbukota & akara wdg. Don'tgaghị echegbu onwe gị gbasara ngwakọ, ogologo oge mbupu ma ọ bụ akaụntụ Aliexpress gị ka egbochiri.
Anyị nwere ike ịnye ọrụ mmezu ọkachamara na China. Nwere ike ịgbanwe Aliexpess, Alibaba na iwu taobao iji mezuo site na NextsChain. anyị ga-enyere gị aka ijikwa iwu gị na mmejupụta ngwaahịa, na-enye gị azịza kachasị mma.
Hazie mbukota & Mbọn
NextsChain na-enyere gị aka ịhazie akara ngosi nke ika gị na igbe mbukota, akpa na Mpempe akwụkwọ. Anyị na-akwado OEM & ODM nhazi nke akara ika gị na ihe iwu gị.
Gịnị mere anyị ji Dị Iche
Ọtụtụ nde ngwaahịa ka mma
Ndị ahịa ga-enwe ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa dị elu ma họrọ site na plethora nke ihe karịrị ngwaahịa 500,000 na ọnụ ahịa ahịa ahịa. NextsChian na-enyekwa Mmeri ngwaahịa na ngwaahịa Trending iji nyere ndị ahịa anyị aka ịzụ ahịa azụmaahịa ha nke ọma.
Buck Dezie Nkwado
NextsChain na-enye mma na mfe iji Buck edit tool ka ị jikwaa ngwaahịa gị Ndepụta rụọ ọrụ nke ọma na obere oge. Nwere ike ịnwekwu oge ị paya ntị na ahịa gị na ndị ahịa azụmaahịa ndị ọzọ.
Mee Ọsọ Ngwa
NextsChain na-enye gị ohere itinye 100 nke iwu na nkeji, karịa ngwa ọrụ ọ bụla! Chekwaa oge ma nweta ezigbo ọrụ na onye mmekọ AliExpress dropship!
Ebighi-ebi Free Plan
Anyị na-enye atụmatụ ebighi ebi
NextsChain App nwere ezigbo azịza imewe, rụọ ọrụ nke ọma na ama gị, Tebụl ma ọ bụ PC compuer. ị nwere ike ijikwa azụmahịa azụmaahịa gị n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Iwu Nmezu Onwe-ya
Mbupu Ọsọ & Efu
Ọ na-ewe ihe dịka ụbọchị 5 - 8 iji ruo US, ụbọchị 3-8 gaa Japan, Korea, Singapore, Malaysia. Ihe dị ka ụbọchị 4 - 10 iji ruo Canada, Australia, Mexico, ma ọ bụ mba EUR.
Ọ bụrụ n’ị na-azụ ahịa azụmaahịa na oberlo tupu. anyị enweghị ike inyere gị aka belata oge nnyefe na mkpokọ omenala & ịkọ ngwaahịa gị, kamakwa nyere gị aka ibubata ngwaahịa sitere na oberlo ruo NextsChain na ngwaahịa jikọtara naanị na ịpị aka ole na ole kama idetuo otu otu.
Ngwugwu ngwugwu & Jikwaa
Site na sistemụ nyocha ngwugwu ọgụgụ anyị, NextsChain ka ị jikwaa ngwungwu gị nke ọma, ị nwere ike ịchọpụta ebe ngwugwu gị na mgbe ha ga-eweta. Iji zere ọtụtụ ndị ahịa na-eme mkpesa ma chekwaa oge dị ukwuu.
Auto Ndepụta Ngwaahịa & efu Jikwaa
Ọrụ njikwa ngwa ahịa na-arụ ọrụ ozugbo, yana mmelite na-akpaghị aka ọnụ na nkwupụta site na iwu. Ọ bụ nnukwu ihe ọzọ na AliExpress.
Anyị na-ejikọta na nyiwe ecommerce ndị a na n'ọma ahịa
Nkesa maka uwa!
Site na sistemụ nyocha ngwugwu ọgụgụ isi anyị, NextsChain ka ị jikwaa ngwungwu gị nke ọma, ị nwere ike ịchọpụta ebe ngwugwu gị na mgbe ha ga-eweta. Iji zere ọtụtụ ndị ahịa na-eme mkpesa ma chekwaa oge dị ukwuu.
Anyị na-enye 500,000+ ngwaahịa ka mma na ọnụahịa ahịa ahịa
Kwụsị imefu ego na ngwaahịa ọjọọ, NextsChain na-enye ọtụtụ ngwaahịa na-emeri mmeri maka ire ere.
Nwa & Nwa
Uwe ụmụ nwanyị
Akpụkpọ ụkwụ & Akpa
ulo & ubi
Mma & Ahụike
&Mụaka & Tomụaka
Ọla & Anya
Kọmputa & Ọfịs
Ngwa a bụ egwuregwu na-agbanwe nnukwu ngwaahịa nnukwu oge mbupu na nnukwu ọnụ ụlọ iji nweta uru ndị na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa kachasị mma m rụtụrụla m gbabara n'okwu ma dozie ya n'ime oge kwesịrị ekwesị n'otu ụbọchị. Ngwa dị mma. Imirikiti ihe bụ mbupu n'efu
Ndị agha Apple Watch Bands
Ahọrọ m ngwa a n'ihi na achọrọ m ịnye ndị ahịa ngwa ngwa na UK (na nke nwere ike zuru ụwa ọnụ, n'ikpeazụ) dịka oge mbupu ụbọchị 20-40 site na ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ buru oke ibu. Enwere m ụdị ngwaahịa ụfọdụ, yabụ enwere m ụjọ na nhọrọ m ga-ejedebe, mana enwere ibu. Enwere m ihe karịrị ngwaahịa 160 na-eche ibubata, ha niile dị oke mma. Aha ngwaahịa dị mma ma dozie, ọnụahịa nwere ezi uche maka ịda mba wdg. Enwetabeghị m usoro site n'aka ha (IR ...
Enweela m ngwa a ma ọ dịkarịa ala ọnwa 2 tupu ịde nyocha a. Ọtụtụ nyocha e nyere na ụbọchị 1 nke iji. Nke a bụ ezigbo ngwa. Emechara m usoro nlele nke ezigara na oge dị ka ekwuru. Ebubatala m ma ọ dịkarịa ala ngwaahịa 150 na ihe ịga nke ọma. M kpọtụụrụ support dịkarịa ala 5 ugboro na a nnọọ n'oge omume ọ bụla. Aga m akwado onye a na ngwa a. Daalụ nke ukwuu NextsChain! m na-agbakwunye na nyocha a. Achọrọ m ka onye ọ bụla mara ezigbo ahụmịhe m na Ne ...
OM Ejiji Boutique
Obi dị m ezigbo ụtọ na Nextschain. ọtụtụ ngwaahịa ịhọrọ site na nnukwu ọrụ ejiji. Enwere m nsogbu ma ha nyere m aka ozugbo wee dozie m. daalụ nke ukwuu NextsChain.
Mmanya na kọfị hụrụ n'anya
M na a na-eji nke a ngwa n'ihi na ọnwa na ọ bụ ugbu a m na-aga ngwa n'ihi na m ụlọ ahịa. Achọtala m ngwaahịa na ebe a enweghị m ike ịchọta na ngwa ndị ọzọ mezuru. Achọghị m iji oberlo ma jiri aliexpress n'ihi na oge mbupu dị egwu na ị ga-emeso otu nde ndị na-ere ahịa dị iche iche. Nextschain na-elekọta ihe niile. Nweta iwu ma kwụọ ụgwọ ahịa ahụ ma ha ngwugwu ma bupu ngwaahịa a ma zipụ ozi nkwenye ụgbọ mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu ọ bụla ha ga-alaghachikwute gị na ...
Ezigbo maka gị
Ọfọn ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite ịda mba 2020 a, elela anya na ị nọ n'ọnọdụ ziri ezi, Nextchain nwere nkwado na ngwaọrụ niile maka gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ndị ahịa ha na-eme bụ ịpị aka ole na ole iji nyere aka. gi ma dozie ma mezie nsogbu gi. Nextchain bụ azụmahịa ahụ.
Ọrụ Nnukwu Mbupu Ọrụ. Nnọọ mma karịa ngwa niile na ngwa ngwa eji m eji. Daalụ maka ezigbo ọrụ ma na-eme ka nsị na mma.
Pooch Enyi na Enyi
Akpa, M wee gafee ngwaahịa a enweghị usoro na enweghị m ike inwe obi ụtọ karịa na m mere! ọ bụrụ na m gafee n'oge a, ọ ga-echekwara m ọtụtụ oge. Ha ngwaahịa dị ukwuu, na-enye ahaziri mbupu teepu na igbe na-enyere gị aka iru gị ika, wdg. Ha free atụmatụ na-enye oge mbụ dobe shippers a nnukwu atụmatụ ebe ị nwere ike itinye ngwaahịa 1,000! Oge mbufe na US bụ ihe dị ka ụbọchị 5-9, nke dị oke mma ma e jiri ya tụnyere Aliexpress na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Enwere m ohere iji thei ...
Adị m ọhụrụ na mbupu iwu maka ụlọ ahịa m. NextsChain kwụgoro dị ka ọrụ mbupu ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na amaghị m ihe m ga-eme, eji m nkata nkata soro otu enyi na enyi nwere nghọta wee kọwaa m ọrụ ahụ. E mesiri m obi ike na mbupu ahụ dị ngwa ma na-elekọta ya. Nextschain enweworị ihe ọmụma banyere ngwaahịa m maka m. Enwere m ekele maka nlebara anya pụrụ iche ha nyere na nkọwa, nke na-azọpụta m oge. Martinez
otu o si aru oru
Wụnye NextsChain App
Wụnye NextsChain ngwa n'ụlọ ahịa shopify gị.
Nye iwu na 1-pịa ma kwụọ ụgwọ maka ndị na-eweta Nextschain.
Nye iwu ma kwụọ ndị na-eweta ngwaahịa Nextschain.
Negbọ mmiri site Nextschain
Mbupu iwu ahịa gị si Nextschain nkwakọba diretly.
NextsChain Uru Isi
Gịnị kpatara Nextschain ji ka mma?